Domain Discovery: Enterprise Management ye Domain Assets | Martech Zone
Domain Discovery: Enterprise Management yeDomain Assets
Muvhuro, Nyamavhuvhu 8, 2016 Russell Artzt
Nyongano inovanda mudhijitari. Chero kambani inogona kurasikirwa nyore nyore nenjere dzayo yedhijitari munguva iyo kunyoreswa kwesizinda kunoitika nenzira dzakasiyana siyana uye kana kubatanidzwa nekutenga zvinowedzera mawebhusaiti matsva kune musanganiswa.
Maseru akanyoreswa uye haana kumbogadzirwa. Mawebhusaiti anoenda makore asina kugadzirisa. Misanganiswa yakavhenganiswa pamapuratifomu ekushambadzira. Yakawanda mari. Mari dzakarasika.
Iyo inzvimbo isina kugadzikana.
Makambani 'enzvimbo enzvimbo yedhijitari ari kuramba achichinja, uye kuchengetedza track kungave kwakaoma, kana zvisingaite.
Makambani mazhinji akatove akabatikana mune ino nyonganiso yedhijitari.
Funga nezve iyo kambani yakaedza kunyoresa imwe domaini uye ikawana yatotorwa. Kuongorora webhusaiti iyi, vatungamiriri vakaziva zvemukati zvaitaridzika zvakanyanya kunge zvavo zvigadzirwa uye zviratidzo uye nekukurumidza vakaita kuti dhipatimendi ravo repamutemo rigadzire kurwisa - chete kuti vaone kuti domain yakanyoreswa kune ichangobva kuwanikwa subsidiary.
Zvinonzwisisika, kambani iyi yainetseka kuti kubiridzira kuri kuitika, uye vangadai vakaenda kumubhadharo wakakura kuti varwisane nayo nekuti vaisaziva kuti ndeyayo nguva dzese.
Uyu muenzaniso wemhirizhonga uriko munyika yedhijitari. Zvakaoma kwazvo kuteedzera zvese, kwese kwese, uye kunyatsonzwisisa zvaunazvo. Izvo zvinogadzira nyonganiso uye inozopedzisira ichidhurira makambani mari mari.
Kune dzimwe njodzi dzinotarisana nemushambadzi wazvino wedhijitari anosanganisira vashandi vane hunyanzvi vanogadzira domains iyo C-suite isingazive nezvayo kana kutumira zvemukati zvisina tsarukano pamakambani ehurumende emakambani.
Zvinogoneka kuti vashandi vari kumhanyisa yavo yega bhizinesi kudunhu rakanyoreswa kukambani. Vanogona kunge vakanyoresa zvakasiyana asi vaisanganisira zvigadzirwa zvekambani kana marogo. Makambani anotora seasina basa ivo vanoziva chaizvo izvo zvavanazvo padhijitari, asi zvakajairika kuti ivo havadaro.
Dzimwe njodzi dzinosanganisira zvikwereti zvisingatarisirwi - mukana unokanganisa wekuti zvimwe zvemukati pane imwe webhusaiti isingazivikanwe yakadzika mukambani isingatariswe inogona kukonzeresa.
Kana usiri kudzora madomains ako, iwe unoziva sei zviri paari? Kana mushandi ane hutsinye kana mumiririri asingatenderwe anonyora dura muzita rako rekambani uye zvinyorwa zvinonyadzisa kana zvisiri izvo, unogona kuve nemhosva.
Kune zvakare njodzi yekambani inokwikwidza pachayo - kwete kungosiya SEO uye mamwe matekinoroji akasimba ekushambadzira patafura, asi ichinyanya kukuvadza zvikamu zvebhizimusi rega nekuzviisa mukusaziva.
Semuenzaniso, iti iwe unotengesa matatu marudzi emajeti, ese akavakwa nemapoka akasiyana ekambani yako. Kana iwe ukashambadzira izvi nemazvo, injini dzekutsvaga dzichakuona seweji yesimba rewijeti uye kukusundira iwe kumusoro kwezvinyorwa zvavo. Asi pasina kubatana, injini dzekutsvaga dzinoona matatu makambani asina kubviswa zvachose, uye pachinzvimbo chekuwana chinosimudzira kubva pahukuru hwako, unozvirovera wega kumashure.
Zvese izvi zvinhu - kubva pakubhadharisa kweakawanda maseru marejista kumakambani anobata chaiwo zviuru zvemawebhusaiti - gadzira kuvhiringidzika, kushomeka zvigadzirwa uye pakupedzisira kumisa makambani kunakidzwa nehunyanzvi, hunoshanda uye mushandisi-unoshamwaridzika wedhijitari.
Kambani isati yatombofunga nezvekuvandudza tsoka iyoyo, inofanira kunyatsoitsanangura. Izvo zvinotanga nekugadzira zvakakwana kunze kwekambani zvigadzirwa zvemadhijitari, hapana zvinoreva feat munguva iyo nzvimbo dzepamhepo dzinochinja nguva dzose.
"Unoziva sei zviito zvekutora kunze kwekunge iwe uchiziva zvaunazvo?" inobvunza Russell Artzt, muvambi uye CEO weDhijitari Associates. "Kana uchinge wawana ruzivo urwu, unogona kuita sarudzo dzakangwara pamusoro pekugadzirisa nzvimbo yako yedigital."
pinda Dhijitari Vanoshamwaridzana, iyo yekushambadzira yekambani kambani inobatsira vatengi kuti vanzwisise yavo chaiyo yedhijitari nharaunda vasati vakurudzira maitiro echiito. Pamwoyo peDhijitari Associates ndeye Domain Discovery, chigadzirwa chitsva icho chinokwanisa kutsvaga ese maseru akanyoreswa kune yakapihwa kambani. Inoita kushandisa dhatabhesi ine simba yepasirese yeanopfuura mamirioni mazana ematanhatu nemakambani emamirioni makumi masere nemasere, iine mamirioni madomeni matsva akawedzerwa vhiki rega rega.
Domain Discovery is a scalable software solution iyo inoongorora 88 mamirioni emakambani epasirese uye anopfuura mazana maviri emamirioni akanyoreswa maseru - aine miriyoni imwe yakawedzerwa kudhatabhesi vhiki nevhiki - kuona tsoka yekambani yedhijitari.
Inokwenenzverwa kumabhizimusi eese saizi, Domain Discovery inoshandisa dhatabhesi rekambani kuitira kujekesa zvakadzama, chimiro chemakambani anodarika mamirioni makumi masere nemasere pasirese - zvese kubva ku IP kero kusvika kunhamba dzefoni kune vatungamiriri veC-Suite - kuona kunyoreswa kunogona ucharasikirwa neyakajairika domain-yekutsvaga maturusi.
Kamwe kambani painonyatsonzwisisa zvinhu zvayo zvemadhijitari, maDhijitari Associates anogona kuongorora mashandiro ekambani iyi online uye kugadzira zano rekubatanidza mameseji ekutengesa, kudzikisa mari yedhijitari uye kuwedzera purofiti.
Ndiwo makambani ane chokwadi chekubata pane yavo yakazara digitaidhi tsoka inozobudirira mune yanhasi hupfumi. Parizvino, zvakadaro, makambani mazhinji haazive mashandisiro avanobata pane avo edhijitari zvinhu uye mashandisiro emamwe matekinoroji uye zviyero zvinogona kuita mutsauko wese.
Tags: vanobatana nedhijitarikuwanikwa kwesizindadomain managementdomainskutarisira domains
Russ Artzt ndiye muvambi uye CEO we Dhijitari Vanoshamwaridzana, uyo pamwe naVince Re, Chief Technologist, vakagadzira gore-based software mhinduro dzekubatsira mabhizinesi kugona kwavo nharaunda yedhijitari.
Uri Emojis Kupora Mukushambadzira Kwako Kutaurirana? ?